trooperktr – Page2– Akoneshare.com
သတိထားမိစေဖို့ ကလေးရှိသူများ ရာသီဥတု အရမ်းပူပါသည် မန်းလေး အပူချိန် 40-42` C ရှိပါသည် ရန်​ကုန်​ အပူချိန်​ 47° C ရှိ​နေပါပြီ ကလေးတွေ ဖျားကြသည် အပူချိန် 104-105` F ထိ ဖျားကြသည် အဖျားသိပ်ကြီးလျှင် တက်သွားနိုင်ပါသည် ကလေးဖျားလျှင် အေးသောနေရာမှာ ထားကြပါ အရိပ်ရသော နေရာမှာထားပါ Air con ခန်းတွင် ထားနိုင်ပါသည် ပန်ကာဖွင့်/ ပြတင်းတံခါးများ ဖွင့်ထားပါ အနွေးထည် မဝတ်ရ ဂျင်းသား အပူစများ မဝတ်ပေးရ ပွပွချောင်ချောင် ချည်ထည် စွပ်ကြယ်သား စပန့်သား အဝတ်များသာ ဝတ်ပေးပါ ရေပတ်တိုက်ပေးပါ ရေပတ်တိုက်လျှင် သဘက်စ ချည်ထည်စကို ရေဆွတ်၍ ကလေး၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို တိုက်ပေးပါ ပတ်ထားပါ …
Continue reading “ရာသီဥတု အရမ်းပူနေပါသဖြင့် ကလေးမိဘများ အထူးသတိထားသင့်သော အချက်များ”
❌ ဖုန်းမဖြေရင် ၂ခါထက်ပိုမခေါ်ပါနဲ့။ မိမိဖုန်းဖြေဖို့ထက်အရေးတကြီးလုပ်နေတယ်လို့မှတ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးစာပို့ထားလိုက်။ ❌ ပိုက်ဆံချေးထားရင် နည်းများမဆိုပြန်ပေးပါ။ ပစ္စည်းငှားထားရင်လဲ အပ်တိုတစ်ချောင်းကအစ၊ ဘောပင်၊ စာအုပ်၊ ထီး အဆုံးအကုန်ပြန်ပေးပါ။ အကယ်၍ကိုယ်ဖျောက်လိုက်မိရင် မူလပစ္စည်းထက်တန်ဖိုးမနည်းတဲ့ဟာဝယ်ပေးပြီး ဆောရီးပြောပါ။ ❌ ကြားမဖြတ်ပါနဲ့။ ဘာလုပ်လုပ်( အိမ်သာတက်, ကားမောင်းအစ)တန်းစီပါ။ ❌ သူများမုန့်ဝယ်ကျွေးတာစားရင် ဈေးအကြီးဆုံးဟင်းလျာ/ စားစရာမမှာပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွေးမွေးဒကာခံသူကိုပဲသူ့စိတ်ကြိုက်မှာပါစေ။ ❌ သူများဖြေဖို့အခက်တွေ့စေမဲ့မေးခွန်းတွေမမေးပါနဲ့။ “မယူကြသေးဘူးလား?” “လစာဘယ်လောက်ရလဲ? ” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ❌ ကိုယ့်နောက်ဝင်မဲ့သူရှိရင်တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ပေးထားပါ။(သူတို့ဝင်လာနေရင်ပေါ့) အဲလိုပဲကိုယ်ဝင်လာတာမြင်လို့တံခါးဖွင့်ထားပေးနေသူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။ ❌ သူငယ်ချင်းနဲ့တက္ကစီအတူပေါင်းစီးလို့ကျငွေသူရှင်းရင်နောက်တခါမဖြစ်မနေကိုယ်ရှင်းပါ။ ❌သူတပါးရဲ့နိင်ငံရေးအမြင်သဘောထားကိုလေးစားပါ။ (နိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းမတူတာကိုလက်ခံပါ) ❌ အရေးတကြီးမှမဟုတ်ရင်ညကြီးမိုးချုပ်ဖုန်းမဆက်ပါနဲ့။ ❌ သူများစကားပြောနေချိန်ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့။ ❌ ကိုယ်စ နောက်လိုက်တာသူတပါးမကြိုက်ရင် ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းပါ။ နောက်နောင်လဲအဲဒီလိုဘယ်တော့မှ မစနောက်ပါနဲ့။ ❌ ကိုယ့်ကိုကူညီသူတိုင်း(အသေးအမွှားလေးကအစ)ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။ ❌ ချီးကျူးစရာရှိရင်လူရှေ့သူရှေ့ချီးမွမ်းပါ။ ဝေဖန်မှုကိုတော့နှစ်ကိုယ်ကြားမှာဝေဖန်ပါလေ။ ❌ ကိုယ်ပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မပြရင်လေကုန်ခံပြီးဆက်မပြောပါနဲ့တော့။ သူစိတ်မဝင်စားတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင် ခပ်တိုတိုအဖြေပေးတာ၊ အကြည့်တွေတခြားဆီရောက်နေတာ၊ ကိုယ်နဲ့တဖြေးဖြေးဝေးသွားတာမျိုးတွေပေါ့။ ❌ ဝိတ်အတတ်အကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမဝေဖန်မိပါစေနဲ့။ “ယူသိပ်မိုက်တယ်နော်” လို့သာပြောပါ၊ ဝိတ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးသူတို့စပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ❌ ခရီးရှည်မသွားခင်ရေချိုးသန့်စင်ပါ၊ …
Continue reading “လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်နာသင့်သော လူ့ကျင့်ဝတ်များ…”
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အိမ်အကူအလုပ်ရာ ကနေ ပြန်လာစဉ် မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူအတုတွေ လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားခြင်း ခံထားရသူ အမျိုးသမီးငယ်ကို ဧပြီ(၁၈)ရက်နေ့က ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးက အမှုကို အပြီးအပြတ်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ လယ်ကြားမြောင်ကျေးရွာမှာ နေထိုင်သူ နော်သောသွဲ့ထူးကို (၂၀၁၈)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်က ငွေစက္ကူ တစ်သောင်းတန်အတု (၁၅၄) ရွက် ကိုင်ဆောင် မှုကြောင့် ဒိုက်ဦးမြို့မ ရဲစခန်း(ပ) ၁၄၂၀/၂၀၁၈၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၅ /၁၀၆နဲ့ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျမတို့အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်ကပဲ စွဲချက်မတင်ဘဲ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၃(၁)အရ ဒီတရားခံကလေးမလေးမှာ အပြစ်မရှိကြောင်းပေါ်လွင်တဲ့အတွက် အမှုကနေ အပြီးအပြတ် လွှတ်လိုက်တယ်လို့” အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဒေါ်အေးအေးမြင့်က …
Continue reading “စင်ကာပူအိမ်အကူ အမျိုးသမီး တစ်သောင်းတန်အတုကိစ္စ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်”
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ပန်ဆန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော UWSA နှစ် ၃၀ ပြည့် ” ဝ “တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့် ပေးပို့သောသဝဏ်လွာကို ဦးစန်းပွင့်( ဗိုလ်မှူးကြီးအငြိမ်းစား ) မှ ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း
သင်္ကြန်​ အတက်​​နေ့က ပတလ ရဲစခန်းပိုင်​ကျွန်း​တောအုပ်​စုတွင်​ ပြသနာဖြစ်​သွားသည်​…………. ဖြစ်​စဉ်​အကျဉ်းချုပ်​က​တော့သင်္ကြန်​ အတက်​​နေ့ကကျွန်း​တောအုပ်​စု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးမှ စခမထံ ဖုန်းဆက်​​တိုင်​ကြားသည်​ ကျွန်း​တောရွာ​နေ ဖိုးသဲဆိုသူသည်​ မူးယစ်​ရမ်းကားပြီးသူ၏​နေအိမ်​ကို မီးနှင့်​ ရှို့ သဖြင့်​ရပ်​ရွာကဝိုင်း၍ငြိမ်းသပ်​လိုက်​ရသည်​ပတ်​ဝန်းကျင်​ကိုလဲ ဓားကိုင်​ကြိမ်း​မောင်း​နေသည်​ စခမ မှ တပ်​ကြပ်​ကြီးတစ်​ဦး ဦး​ဆောင်​​သော အင်​အား၎ ဦးလွှတ်​လိုက်​သည်​​ကျေးရွာ ဥက္ကဌ နှင့်​​ကျေးရွာလူကြီးများ အပါအဝင်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှ အဖမ်းခံရန်​ ​ပြောသည်​အိမ်​​ရှေ့ တံခါးဖွင့်​​ပေး​သော( တရားခံဖိုးသဲ၏ )ဇနီးကိုဖိုးသဲမှ လည်​ပင်းကို ကိုင်းခုတ်​ဓားဖြင့်​ ၂ ချက်​ခုတ်​ပစ်​သည်​ ​နေရာတွင်​ပင်​​သေဆုးံသည်​ ​ကျေးရွာအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးမှ စခမ ထံ ထပ်​၍ဖုန်းဆက်​တိုင်​ကြား​သော​ကြောင့်​ စခမ ကိုယ်​တိုင်​ ရဲအင်​အား၆ဦး ပတလမြို့ ရပ်​ကွက်​ကြီးများမှ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးများလူမှုကူညီ​ရေးအသင်းမှကားများအဖွဲ့ဝင်​များပတလမြို့ ​ဆေးရုံအုပ်​ကြီးအပါအဝင်​အင်​အားအပြည့်​အစုံဖြင့်​ ကျွန်း​တောရွာသို့သွားသည်​ ရဲလုပ်​ထုးံလုပ်​နည်းများအတိုင်း အဖမ်းခံရန်​​အော်​ဟစ်​အသိ​ပေးသည်​“အဆင်​သင့်​ဘဲ သတ္တိရှိတဲ့​ကောင်​ ဝင်​လာခဲ့”ဟုတရားခံမှ ဆိုသည်​စခမ မှ ​သေနပ်​ ၃ ချက်​မိုး​ပေါ်​ထောင်​​ဖောက်​သည်​အဖမ်းခံရန်​ ဆက်​​အော်​သည်​ ​ကျေးရွာ …
Continue reading “လူဆိုးလူမိုက်ရန် ကာကွယ်သော စခန်းမှူးအား ပြည်သူများဝန်းရံ”